Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah - Shaqaalaha
Shaqaalaha Sare ee Caalamiga ah
Byron Radcliffe wuxuu keenay sanado badan oo waayo aragnimo hogaamineed ah EAI. Iyada oo asal u ah horumarka caalamiga ah, qorsheynta ganacsi ee istiraatiijiyadeed, iyo kobcinta maaliyadeed ee hal-abuurka leh, Byron ayaa sii ballaarinaysa gaaritaanka hay'adda.
In ka badan shan sano, Haraouna Abdoulaye waxay horseedday dadaallada maxalliga ah ee lagula dagaallamayo xagjirnimada rabshadaha ah iyada oo loo marayo mashaariicda dhisidda iyo barnaamijyada ku dhiirrigeliya dhallinyarada in ay tallaabo qaadaan.
Madaxa Xisbiga - USAID Codadka Nabadda
Sabina Behague waa Maareeyaha Isgaarsiinta Sare ee EAI. Iyada oo leh khibrad 20 sano ah xagga isgaarsiinta iyo horumarka caalamiga ah, iyadu waxay aad ugu xeel dheer tahay qorista / tafatirka, isgaarsiinta, maareynta mashruuca, iyo soo jeedinta iyo horumarinta ganacsiga cusub.
Iyada oo 10 sano ah oo waayo-aragnimo shaqo ah kuna nooshahay Galbeedka Afrika, Barrett Browne ayaa hormuud ka ah dadaallada EAI ee guud ahaan gobolka ee amniga iyo dhisidda nabadda.
Maamulaha Farsamada Sare
Graham Couturier wuxuu keenayaa in ka badan 12 sano oo waayo-aragnimo barnaamij cusub ah doorkiisa ah kuxigeenka fulinta. Wuxuu khibrad ballaaran u leeyahay hirgelinta barnaamijyada ka socda Afrika iyo Koonfur Aasiya oo dhan wuxuuna u horseeday kobcinta EAI iyo istiraatiijiyadda ballaarinta juqraafi.
Kyle Dietrich waxay leedahay khibrad 15 sano ah oo ka shaqeysa isku dhacyada iyo dagaalada kadib. Wuxuu ku takhasusay qaabeynta barnaamijka hal abuurka, falanqaynta khilaafaadka, dhisidda nabadda iyo CVE iyada oo xoogga la saarayo qaabab ku saleysan oo hanti laga helo isbedelka bulshada.
Agaasimaha, Dhisidda Nabadda iyo Dib-u-habeynta Xagjirnimada
Maaddaama ku takhasusay is-beddelka isgaarsiinta iyo dhaqanka oo leh 12 sano oo waayo-aragnimo ah, Katiella Gasso Gaptia ay u keento aragti gaar ah qaab-dhismeedka isbedelka bulshada ee EAI ee gobolka Sahel.
Agaasimaha Farsamada - USAID Codadka Nabadda
Agaasime, Maaliyad iyo Hawlgal
Clint Lambert wuxuu leeyahay toban sano oo waayo-aragnimo ah dhammaan barnaamijyada nololeed ee barnaamijyada horumarineed laga bilaabo abaabulka deg degga ah ilaa dhammeystirka barnaamijka oo ay ku jiraan isgaarsiinta, warbixinta M&E, maaraynta barnaamijka, u hoggaansanaanta qandaraaska, iyo howlaha.
Lataliye sare, hawlgallada
Assaleh Ag Ousmane waa khabiir ku takhasusay sharciga shaqada iyo dhaqanka ee dalka Maali oo leh labaatan sano qibrad u leh howlaha iyo maamulka shaqaalaha gudaha iyo caalamiga.
Binita Shrestha waa khabiir ku takhasusay qaabeynta barnaamijka, hirgelinta iyo qiimeynta oo leh taariikh barnaamijyo hogaamineed ee deegaannada siyaasiyan xasaasiga ah muddo toban sano ah.